မနောသူလေးချီချီ: July 2012
phone no ထည့်စရာမလိုပဲ ဂျီမေးအကောင့် ဖွင့်နည်း
တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ Login Name ကို Check Availability တော့စစ်မရဘူး။ အကုန်ဖြည့်သွား နောက်ဆုံး Account လုပ်မယ်လို့ နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှ ကိုယ်ထည့်တဲ့ Login Name က မရရင် ပြန်ထည့်ရတယ်။ အဲ့တစ်ခုတော့ စိတ်ရှည်ရတယ်ဗျ။ ကျန်တာ ဘာမှ ပြဿနာမရှိ။ ကိုယ်ထည့်တဲ့ Login Name ရပြီဆိုရင်တော့ မေးလ်အသစ်လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။ ဒါဆို အောက်ကအတိုင်း ပေါ်လာပါမယ်။
Step 4. ကဲ... အကောင့်သစ် ရ မရ gtalk မှာဖြစ်ဖြစ် ၀င်စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ တခါတည်း မီးအစိမ်းလေးလင်းလာရောဗျာ
Posted by မနောသူလေးချီချီ at 9:04 PM No comments:
Posted by မနောသူလေးချီချီ at 7:40 PM No comments:
Posted by မနောသူလေးချီချီ at 7:39 PM No comments:
တကယ်ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အားလုံးမှတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ မယုံဘူးလား ..
ကဲ . ကိုရေးတာတွေ password တွေ ပါမသွားအောင် လုပ်လိုက်ရအောင် .. ။
Ctrl+Shift+Esc (or) Ctrl+Atl+Del နဲ့ Task manager ကို ခေါ်လိုက်ဗျာ ..။
Process ဆိုတဲ့ tab ကို နှိပ်ပြီး msdts.exe ဆိုတာကို လိုက်ရှာကြည့် ဗျာ။
ရှိတယ်ဆို keylogger သုံးထားလို့ပေါ့ ။
အမြန်သာ click နှိပ်ပြီး End process ပေးလိုက်ပေတော့ ။
အဲဒါဆိုရင်တော့ keylogger ကို ကာကွယ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ task manager မှာရှိတဲ့ process tab ထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေထဲက ကိုယ်သုံးမယ့် gtalk လောက်ပဲ အိုကေထားပြီး ကျန်တာတွေကို disable သို့မဟုတ် end process ပေးလိုက်တာပါပဲ...။
ဘာလို့ဆို ရိုးရိုးယူဆာတွေအနေနဲ့က ဘယ်လိုဖိုင်လ်က အချက်အလက်တွေကို ရီကော့လုပ်တာလဲဆိုတာ မသိနိုင်တော့ အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းအားလုံးကို end process လုပ်ပြီး.......
ကိုယ်သုံးတဲ့ အကောင့်ကိုပဲ manually ခေါ်သုံးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Posted by မနောသူလေးချီချီ at 7:07 AM No comments:
Posted by မနောသူလေးချီချီ at 6:50 AM No comments:
ကျွန်တော် အခုရေးမဲ့ ပို့စ်လေးက အခုတလောမှာ နေရာတိုင်းနီးပါးမှာ ကြုံနေရတဲ့ G-talk အကောင့်က သုံးနေရင်းနဲ့ ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး Hack ခံလိုက်ရပြီလို့ ထင်တဲ့သူတွေ မိမိ G-mail ဖွင့်လို့ မရတော့တဲ့ အတွက် စိတ်ညစ်နေရသူတွေ အတွက်ပါ .. သတိထားမိ ကြရင်တော့ သိပါလိမ့်မယ် .. အခုလိုမျိုးတွေ ကြားနေရတာ ဒီလပိုင်းအတွင်းမှာပါ .. အဲ့ဒါဘာကြောင့် ဖြစ်ရလည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google ကြီးကနေပြီးတော့ သူရဲ့ User တွေရဲ့ အကောင့်တွေကို အခိုးခံရတာတွေ မဖြစ်ရလေအောင် G-mail အကောင့် Password လွယ်လွယ်လေးတွေ ပေးထားတဲ့ အကောင့်တွေကို Verify ပြန်လုပ်ခိုင်းပြီး Password တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ယူလို့မရအောင် Security ပိုင်းမြှင့် လိုက်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် .. ကြုံဖူးတဲ့သူတွေ သတိထား ကြည့်လိုက်ပါ .. အခုလိုမျိုး ဘယ်လိုအကောင့် မျိုးတွေမှာ ဖြစ်တက်လည်း ဆိုရင် Password ကို ( ဥပမာ ။ ။ 12345 , , 5201457 ) အစရှိသဖြင့် ပေးထားတဲ့ အကောင့်မျိုး တွေဖြစ်တာများ ပါတယ် ..
မြန်မာပြည်မှ Phone Verification လုပ်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိသူများ ကူညီပေးပါမယ် .. ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ကို G-mail အကောင့်နဲ့ Password ပေးပြီး အကူအညီတောင်း နိုင်ပါတယ် .. pyay.phyo75@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်ပြီး အကူအညီ တောင်းခံနိုင်ပါတယ် .. ပြည်ပမှ သူများကတော့ ကျွန်တော် အခုရှင်းပြထားတာကို ကြည့်ပြီး လုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ..
crazy bag.ning.com မှကူးယူတင်ပြသည်
Posted by မနောသူလေးချီချီ at 2:54 AM No comments:
အောက်တိုဘာလ 31, 2011 တွင် 1:16am မှာ kaungkinmyo မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ 1, 2011 တွင် 5:03am မှာ နတ်သားလေး မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
ကိုယ့်စိတ်ကို မယုံတာနဲ့ အကိုဆီကို သွားမေးလိုက်တယ်..။နည်းပညာနဲ့ ပက်သက်ရင်တော့..ကျွန်တော်အတွက်က
အကောင့်သုံးနေရင်း Distabled ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံ တချို့ ကိုတော့တွေ့ ဖူးပါတယ်..အကောင့်က၀င်နေရင်း..Distabled
နောက်ပြီးတစ်ခုခုဖြစ်ရင် သူများအကူအညီတောင်းဖို့ ပဲမစဉ်းစားပါနဲ့ ..Solution ဆိုတာ Google မှာရှာလို့ ရပါတယ်။
တကယ်လို့Disabled ဖြစ်သွားပြီးဆိုရင် အောက်ကပါတဲ့လင့်ဒ်လေးမှာသွား Try ကြည့် လိုက်ပါ.အဆင်ပြေမှာပါဗျာ..။
နောက်ထပ်သေချာတဲ့Solution တွေကိုထပ်မံစုဆောင်း တင်ပြသွားပေးပါ့မယ်....။
Posted by မနောသူလေးချီချီ at 2:53 AM No comments:
ကော် နက် ရှင် တက်အောင် run နှင့် ရိုက် ပြီး ကော်နက် ရှင် တက်အောင် လုပ် နည်း
စက်တင်ဘာလ 6, 2011 တွင် 12:08pm မှာ တာရာမောင်ငယ် မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
နေ့ခင်းဘက်တွေမှာ မြောက်များလှစွာသော အင်တာနက်သုံးစွဲသူများကြောင့် ကွန်နက်ရှင် ကျဆင်းသွားပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းများစွာရှိပေမယ့် တစ်ချို့အချက်တွေ ပြင်ဆင်ဖြည့်တင်းလိုက်ရင် မြန်နှုန်းမြင့် ရရှိလာနိုင်ပါတယ်။ စမ်းသုံးခဲ့သမျှ ပိုမြန် ပိုသွက်လာပါတယ်။
၁။ ။ Start/Run/GPEDIT.MSC/Computer Configuration/Administrative Template/Network/QoS packet scheduler ဟုအဆင့်ဆင့် သွားလိုက်ပါ။ limite reserable bandwidth ကို double click လုပ်ပြီး ပေါ်လာသောboxမှာ enable/bandwidth %0ဟုပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ ကွန်နက်ရှင် တက်လာပါလိမ့်မယ်။
၂။ ။ Start/Run/regedit/Hkey current user/software//microsoft/windows/current version/internet setting ဟုအဆင့်ဆင့် သွားလိုက်ပါ။ "MaxConnectionPerServer"=dword:00000040
"MaxConnectionPer1_0Server"=dword:00000040 ကိုcreate လုပ်ပါ။ ဒီ registry file ကို run ခိုင်းရင်လည်း ရပါတယ်။
၃။ ။ Start/Run/cmd ဟုသွားပါ။ ipconfig/fluh dns ရိုက်ရ်ျ DNS ကိုရှင်းပစ်ပါ။
၄။ ။ browser မှ history,cookie and temporary ဖိုင်တွေရှင်းပစ်ပါ။
၅။ ။ connection booster တစ်ခုခုကိုသုံးပါ။ ဥပမာ limewire ကို patch လုပ်ထားလျှင် browser မှာ မြန်နှုန်းမြင့်လာပါတယ်။
ဒါဆိုပိုမြန်လာသလားစမ်းသပ်မယ်။ ဒီဆိုဒ်မှာ ကွန်နက်ရှင်ဘယ်လောက်ရှိလည်း စမ်းသပ်ပြီး ကျေနပ်စွာ ပြုံးလိုက်ပါ။
ပြင်ဆင်ချက်။ ။ အမှတ်စဉ် ၃ ဧ။် "ipconfig/fluh dns" အား " ipconfig /flushdns " ဟုပြောင်းလည်း ရပါမည်။
Posted by ခရီးသည်
Posted by မနောသူလေးချီချီ at 2:48 AM No comments:
လိုင်းမကောင်းပဲ Gtalk နှဲ့ Gmail သုံးချင်သူများအတွက်
အောက်တိုဘာလ 18, 2011 တွင် 9:32pm မှာ yarzarkokomg မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
လိုင်းမကောင်းပဲ ဂျီတော့ နှင့် ဂျီမေးလ် သုံးချင်သောသူငယ်ချင်းများအတွက် ကျွန်တော် အခုမှသိသောနည်းကို
http://karoolark.com/ ကိုရိုက်ထည့်ပြီးဝင်လိုက်ပါ .....
ဂျီမေးလ် ထဲ သွားချင်ရင် စာအိတ်ပုံကို ကလစ်ပါ
ဂျီတော့ ထဲ ၀င်ချင်ရင်တော့ ဂျီတော့( talk)ပုံ ကို ကလစ်လိုက်ပါ
New tab link ခေါ်တိုင်း google home page ပေါ်အောင်ပြုလုပ်ချင်ရင်
အောက်တိုဘာလ 25, 2011 တွင် 9:30am မှာ AII မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
ဒီပိုစ့်ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အကူညီတောင်းလာလို့ ဖြေပေးရတာပါ ။ Friefox newtab မှာ ဒီတိုင်းပဲလေ ။ ဘာမှပေါ်မလာဘူး ။ newtab ကို နိပ်တိုင်း home ကိုသွားရတာ ပျင်းတယ် ထင်သပ ။
ကလိုဆို ဒီလုပ်လိုက် ။ ပထမဆုံး ဒီနေရာလေးကို သွားပြီးတော့ Add-On လေးကို အက်လိုက်ပါ ။ newtab ခေါ်တိုင်း Google ကို တန်းရောက်သွားပါလိမ့်မယ် ။ Add-On လုပ်တာကို မသိသေးဘူးဆိုရင် ဒီနေရာမှာ နည်းသွားယူလိုက်ပါဗျာ ။ ကျန်တာတော့ လွယ်ပါပြီ ။ အဲသမှာ ကိုယ်သွားစေချင်တဲ့ ဆိုဒ်ကို ထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာ ။ ဥပမာ http://www.google.co.th/ ဆိုရင် ကူးထည့်လိုက်ရုံပဲ ။ အပြည့်အစုံတော့ ထည့်ရမယ် ။ ပုံကို ကြည့်လိုက်ပါဦး ။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပြေလုပ်နိုင်ပါစေ ။
Posted by မနောသူလေးချီချီ at 2:46 AM No comments:
Gmail အကောင့်သစ်ဖွင့်တတ်ချင်သူများနှင့် အကောင့်သစ်လိုချင်သူများ အတွက် လွယ်ကူသောလမ်းညွှန်လေးပါ....
အောက်တိုဘာလ 21, 2011 တွင် 3:22am မှာ yarzarkokomg မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
ကျတော် ပုံနဲ့တော့မရှင်းပြတော့ဘူးနော် သိသူများလည်း ကျော်သွားပါ မသိသူများအတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်....ပထမ ဆုံး ဂျီတော့ ကိုဖွင့်ပါ Singin မလုပ်ပါနဲ့ အောက်က Forgot your password နဲ့ Don't have an account နှစ်
ခုရှိတဲ့ထဲက Don't have an account ကိုကလစ်ပါ..First name:
ကိုတစ်ဝက်ရိုက်ပါ ကိုယ်လိုချင်တဲ့နာမည်ကိုဆိုလိုတာပါ Last name: ကိုတစ်ဝက်ရိုက်ပါ Desired Login Name: မှာ clickလိုက်ပါ ကိုယ်ပေးတဲ့နာမည်က သုံးပြီးသားရှိနေရင်မရပါဘူး နောက်တစ်ခေါက်အနေနဲ့ ဒေါ့ ခံရင်ခံမခံချင်ရင် ကြိုက်တာရွေးပြီးကြိုးစားရှာပါ အဆင်ပြေသွားရင် e.g12345 is available ဆို
ပြီးပေါ်လာပါပြီ...ဒါကနာမည်ရွေးတဲ့ အဆင့်ပါ Password ကတော့ Good ပေး
တဲ့ထိရွေးပါ ပြီးရင် Stay signed in ဒီအဆင့်မှာ အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ခဲ့ပါ....Security question: ဒီအဆင့်ကတော့ ဒေါင်းအဲရိုးကီးလေးနဲ့ ဆင်းလိုက်ပါ....The best of chil.... အဲဒါကိုရွေးပေးပါ....Answer: ဒီအဆင့်မှာတော့ အပေါ်က နဲ့ကိုက်ညီမူ့ရှိအောင် e.g yarzarkokomg ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလိုက်ပါ ဒီအဆင့်ထိလည်းလွယ်ပါတယ်နော်....အရေးကြီးတဲ့ အဆင့်လာပါပြီ.....Recovery email: ဒါက အရေးပါပါတယ် ဒီနေရာမှာဘဲမှားတတ်ကြတာပါ...Google က အကောင့်တစ်ခုကို နောက်ထပ် ပေးရင် နှစ်ခုထပ်ပိုမပေးပါဘူး အကောင့်ဖွင့်ကြတယ် ပြီးတော့ ဒီနာမည်မေးလိပ်စာထပ်ပေးင်္ပြိး အကောင့်ထပ်ဖွင့်ကြတယ် ပြောင်းပါ အဲဒ်ိနေရာမှာ
e.g 12345@gmail.com လိုပေးပြီးဖွင့်ပြီးသွားရင် တစ်ခြား e.g 67890@gmail.com လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါ ဒါဆို အာမခံပေးတဲ့သူအသစ်ဖြစ်သွားပါပြီ ဖုန်းနံပါတ်တွေ လိပ်စာတွေ တောင်းတာတွေကြုံဖူးကြမှာပါ....အဲဒါကဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့ က စစ်ဆေး
တာပေါ့ အလွယ်ရှင်းလိုက်တာပါ....Word Verification: ဒီအဆင့်ကလည်းစ
ကားပြောပါတယ် စာလုံးကြည့်ရိုက်ရပေမယ့် ရူပ်တော့ မှားတတ်တယ် သေချာကြည့်ရိုက်ပါ မအောင်မြင်ရင်နောက်တစ်ကြိမ်ပေါ့.....ကျတော် ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါ အကောင့်လေးတွေ များများကြီးရလာမှာပါ
ကျန်တဲ့ အပိုင်းလေးတွေချန်ခဲ့ပါတယ် စရှည်မှာစိုးလို့ပါ အဲဒိ အပိုင်းလေးတွေကတော့အဆင်ပြေသလို လုပ်ပါ လွယ်လို့မပြောတော့တာပါ
မရခဲ့ရင် နားမလည်ခဲ့ရင် yazarkoko125@gmail.com ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
အချိန်မရလို့ ဓာတ်ပုံနဲ့မရှင်းပြနိုင်တာခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ ခင်ဗျာ
Offline လုပ်ပြီးချစ်သူလေးကိုစမယ် သူငယ်ချင်းတွေကိုနောက်မယ်.....Gtalk......
အောက်တိုဘာလ 21, 2011 တွင် 12:00am မှာ yarzarkokomg မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
Mail ထဲကမဟုတ်ပဲ Gtalk Off Line Login လုပ်ကြရအောင်ဇူလိုင်လ 10, 2011 တွင် 4:55pm အချိန် ကျော်ဇင် မှ နည်းပညာ ကဏ္ဍတွင် တင်ပြခဲ့ပါတယ် စာပို့မယ် အကြောင်းအရာအားလုံးကြည့်ရန်
Gtalk Gadget လို့ ခေါ်တဲ့ http://talkgadget.google.com/talkgadget/popout ကိုသွားလိုက်ပါ။
အဲဒီမှာ အရင်ဆုံး Signin ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပုံမှန်အတိုင်း Gtalk က Username နဲ့ Password ကိုရိုက်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် စလို့ ရပါပြီ… သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို Gtalk မှာလိုပဲ တွေ့ရမယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန် Gtalk နဲ့ တော့ အကုန်မတူဘူးနော်။ သူက တစ်မျိုးလေး… အဲဒီအထဲကို ရောက်ရောက် ချင်း Gtalk အတိုင်းပဲ Online မှာရှိနေတဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို အပေါ်ဆုံးမှာ တွေ့ရမယ်။ အခု အတိုင်း ဆို သူတို့ကလည်း ကိုယ့်ကို Gtalk မှာ Online အနေနဲ့ ပုံမှန်အတိုင်း မြင်ရမယ်…. ပြောချင်တဲ့ သူကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ပြောကြည့်ပါ။ပုံမှန် Gtalk အတိုင်းပဲ…. သူကတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို စကားပြောဖို့ ကလစ်နှိပ် လိုက်ရင် ပုံမှန် Gtalk ကလို Window တစ်ခု အနေနဲ့တော့ ထွက်မလာဘူး။ Tab တစ်ခုအနေနဲ့ Contacts ရဲ့ဘေးမှာ ကိုယ်ပြောမယ့် သူငယ်ချင်းရဲ့ နာမည်နဲ့ ထွက်လာမယ်…ကဲ အခုစပြောတော့မှာက သူငယ် ချင်း တို့သိချင်နေတဲ့ ကိုယ့်ကို သူများမမြင်အောင် offline လုပ်ကြမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေ… အရင်ဆုံး Gtalk မှာ Singout လုပ်ဖို့သွားတဲ့ မြှားလေးကို မှတ်မိတယ်နော်။ အဲဒါက Contacts ရဲ့ အောက်မှာရှိတယ်… အဲဒီံ မြှားကလေး ကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အောက်ဆုံးနားက invisible ကိုရွေးပေးပါ… ဒါဆိုရင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့်ကို မမြင် ရတော့ဘူး။ ကိုယ်က သူတို့ဆီမှာ offline ဖြစ်သွားပြီ… ကိုယ်ကသာ သူတို့ကို မြင်နေရမယ်… ကိုယ်က offline ပုံစံဖြစ်နေပေမယ့် သူတို့ကို စကားသွားပြောလို့ ရတယ်နော်… သူတို့ဆီမှာတော့ ကိုယ်က offline ကြီးနဲ့ စကားတွေပြောနေတာပေါ့…ကဲ စမ်းသပ် ကြည့်လိုက်ကြပါ…
Posted by မနောသူလေးချီချီ at 2:44 AM No comments:
မင်္ဂလာပါ လာရောက်ကြည့်ရှု့ တဲ့တွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကော် နက် ရှင် တက်အောင် run နှင့် ရိုက် ပြီး ကော်နက...
လိုင်းမကောင်းပဲ Gtalk နှဲ့ Gmail သုံးချင်သူများအတွ...
Gmail အကောင့်သစ်ဖွင့်တတ်ချင်သူများနှင့် အကောင့်သစ်...